Mashruuc guuleystay |
Isticmaalka saxda ah ee mashiinka leexinta digada dabiiciga ah
by admin on 2020-09-22
Mashiinka bacriminta dabiiciga ah wuxuu leeyahay doorar badan, dhamaanteen waxaan u baahanahay inaan si sax ah u isticmaalno, waa inaad hanataa habka saxda ah inta aad isticmaaleyso. Haddii aadan fahmin habka saxda ah, mashiinka leexashada digada dabiiciga ah waxaa laga yaabaa inuusan tusin doorarka gebi ahaanba, marka, waa maxay isticmaalka saxda ah ee t ...
Maxaa xusid mudan marka la isticmaalayo iyo marka la shaqeynayo qalabka wax lagu dhejiyo?
Maxaa xusid mudan marka la isticmaalayo iyo marka la shaqeynayo qalabka wax lagu dhejiyo? Aan aragno. Ogeysiisyada: Mashiinka marka la rakibo si waafaqsan shuruudaha, waxaa lagama maarmaan ah in la tixraaco buugga hawlgalka ka hor inta aan la adeegsan, waana inaad aqoon u leedahay dhismaha mashiinka ...
Sidee loola macaamilaa dhibaatada burburka?
Marka la adeegsanayo qalabka wax burburiya, haddii cilad jirto, sidee loola macaamilaa? Oo aan aragno habka daaweynta qaladka! Qalabka burbura gariirka wuxuu si toos ah ugu xiran yahay qalabka wax lagu jajabiyo, taas oo ah mid fudud oo sahlan in la ilaaliyo. Si kastaba ha noqotee, haddii labadoodu aysan si fiican isugu xirnayn ...
Faa'iidooyinka horumarinta degdegga ah ee qalabka bacriminta dabiiciga ah
Qalabka bacriminta dabiiciga ah waa qashin mashruuca khasnadda, qalabka bacriminta dabiiciga ah kaliya ma ahan qiime soo galitaan hooseeya, laakiin sidoo kale faa'iidooyin dhaqaale oo wanaagsan, iyo xallinta dhibaatada wasakheynta deegaanka isla waqtigaas. Hadda waxaan soo bandhigi doonnaa faa'iidooyinka d ...
Qalabka khadka soo saarista bacriminta dabiiciga ah wuxuu si wax ku ool ah u yareyn karaa wasakheynta beeraha
Qalabka khadka soo saarista bacriminta dabiiciga ah wuxuu si wax ku ool ah u yareyn karaa wasakheynta beeraha Wasakheynta beeraha ayaa saameyn ba'an ku yeelatay nolosheena, sida si wax ku ool ah loogu yareeyo dhibaatada halista ah ee wasakheynta beeraha? Wasakhda beeraha ayaa aad u daran maya ...